Iziko leSixeko lihlala eli-1 ixesha elide - I-Airbnb
Iziko leSixeko lihlala eli-1 ixesha elide
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTeam Apartment City
UTeam Apartment City unezimvo eziyi-202 zezinye iindawo.
Amafulethi ayisiphumo seqela lophuhliso bookrooms.de - umbono wokuqonda amagumbi anamhlanje, asebenzayo ukusuka kwisakhiwo esidala ngelixa ugcina umtsalane wesakhiwo esidala. Eli phupha lizalisekile ngoku.
Ukuqinisekisa ukuhlala okumnandi kwiindwendwe zethu, iqela lihlala lizama ukuphendula impendulo kunye nokwandisa amaziko kunye nenkonzo.
Iiflethi zenzelwe ngokukodwa ukuhlala kamnandi ixesha elide. Indlu inefenitshala epheleleyo. Ifulethi ngalinye lixhotyiswe ngekhitshi eligcweleyo, elibandakanya iketile, ifriji, imicrowave, itoaster, ipleyiti eshushu kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokupheka. I-intanethi ekhawulezayo ukuya kwi-1.5 Gbit line kunye ne-Wifi eyakhelwe ngaphakathi / i-W-LAN, i-cable TV, kunye neendleko zentliziyo kunye nombane sele zibandakanyiwe kwixabiso. Indlu nganye inegumbi layo lokuhlambela elineshawa. Ubungakanani bezindlu buhluka phakathi kwe-20 kunye ne-30 yeemitha zesikwere.
Ngokutsho kwe-SPIEGEL, isithili saseHanover Linden sesinye sezona zithili zidumileyo kwizixeko zaseJamani kwaye zikhankanywa kumphefumlo ofanayo neCologne, Berlin kunye neMunich. Nokuba ifashoni, i-cabaret, inkcubeko okanye indawo ye-pub, e-Linden undwendwe luya kufumana yonke into kwindawo evaliweyo kunye nommelwane olungileyo. Isidlo sakusasa sinokuthathwa kwi-café yaseSafran emnyango. Indawo yokutyela ivulwa yonke imihla ukusuka ngentsimbi yesi-9 ukuya ku-2 kusasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Team Apartment City
Sifumaneka kuwe nge-imeyile nangefowuni. Kwiimeko zikaxakeka ungasitsalela umnxeba imini yonke.
Iilwimi: English, Deutsch, Русский, Українська
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hannover